कमल थापालाई खुल्ला पत्र, अध्यक्ष ज्यू एमसीसी कुन आँखाबाट सहि देख्नु भयो ? – Himalitimes
कमल थापालाई खुल्ला पत्र, अध्यक्ष ज्यू एमसीसी कुन आँखाबाट सहि देख्नु भयो ?
| प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ५, २०७६
मुलुकमा गणतन्त्रको रापताप यति उत्कर्षमा थियो जति बेला गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको सिधैं मृत्यु संग संझौता गर्नु थियो तपाईको साहस सुझबुझ पुर्ण राजनैतिक निर्णय बाट यो मुलुकको वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदै थियो। तत्कालिन समयमा हामी साना थियौ । तर ,देशभरका नेता कार्यकर्तामा यति ठुलो उत्साह थियो । जून, उत्साहले मुलुक बचाउन सक्छौ भन्ने बिष्वास पनि बढेर गएको थियो । ०६४ मा ४सिट ०७० मा २५ सिट ल्याउँदा सम्म हामी गतिलो भरोषा बोकेर लड्दै थियौ। यसबिचमा तपाईको विचारोत्तेजक भाषण कला र कार्यकर्ताको लगनसिलता अनि हामिले बोकेका सैदान्तिक आधार स्तम्भहरु बाट नै हाम्रो शक्तिदिन २ गुणा रात ४ गुणाका दरले बढ्दै थियो । जव २५ सिट नेपाली जनताले हामिलाई पत्याएर मतदान गरे र दिए । तब हाम्रा दिनगन्ति शुरु भए।
मूलूकमा नाकाबन्दी भयो जून नाकाबन्दिको जस वा अपजस गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले लिनु पर्थ्यो । तपाईं आत्मरत्तिमा रमाउनु भयो नाकाबन्दी खोल्ने नाममा सरकारमा समेत सहभागी हुनुभयो । त्यसदिन तपाईं जित्दै हुनुन्थ्यो । तर ,मुलुक र सैदान्तिक कार्यकर्ता हामी हार्दै थियौ । त्यसपछि पटक पटक प्रचण्ड देऊवा सरकारमा जानू भयो । पार्टी धारासाहि हुँदै गयो । पार्टी मिलाउनु भयो मिल्यो/छिट्टै फुट्यो फुट्नुमा कमजोरी तपाईका धेरै देखिएनन् पनि तर, तपाईले आफ्ना किचेन क्याबिनेटमा राख्नु भएका तपाईका मन खुशि निजी निर्णयमा बनाउनू भएका धेरै सांसदले तपाइलाई छोडिदिए । तपाईं कार्यकर्ता चिन्न नसक्ने नेता मध्यको एकजना हो भन्ने साबित हुनु भयो ।
नाकाबन्दि खोल्नु भयो तर ,अपजसको भारि बोकेर जस अर्कैलाई दिलाउनू भयो ।,जुन २ तिहाई त्यहि जसको प्रतिफल हो। हितराज पाण्डेले तयार गरेको संघिय संरचनाको फाईलमा एकाबिहानै दौराशुरुवालमा पुगेर हस्ताक्षर हर्नु भयो जून कुन कार्यकर्तालाइ सह्यैय थियो होला ? जुन कार्यकर्ता संघियताको विरोध गर्दै सडकमा मर्न तयार थियो अध्यक्ष ज्यूको यो कदम के थियो ? राष्ट्रपतिको प्रस्तावक /समर्थक बस्नु । जेनेभा सन्धिमा पार्टिको मर्म बिपरित अभिव्यक्ति दिनु । पार्टिको लागि अर्को दशा थियो । विचार अभिव्यक्ति र बहसका लागि राप्रपा भित्र कहिलै ठाउँनै भएन । नाम भने प्रजातन्त्र राख्न छुटाउनू भएन ।पार्टिको बारेमा कसैले छलफल बहस चलायो भने कारबाहि हुन्थ्यो हामी पार्टि बनाउने नाममा सहँदै आयौँ । सर्वाधिकार तपाईं माथि सुरक्षित थियो जसरि राणाकालिन समयमा जनता राणाको कब्जामा थिए, उसैगरि तपाईको कब्जामा राप्रपा थियो।
यो बिचका पार्टिका आन्तरिक जीवनमा धेरै कमिकमजोरी भए कमजोरी औंल्याउने हामीले प्रयास नगरेका हैनौ तर , सुनुवाई हुने संभावना पार्टी भित्र कहिलै भएन।अरु पनि पार्टीहित बिपरित धेरै निर्णयहरु भए अझ भन्ने हो भने ०७० साल पछि पार्टीको हित र मुलुक को हितमा हाम्रा निर्णयहरु भएनन् हामी कसरी स्खलित हुँदै गयौं? यो अध्यन को कुरा हो एकदिन पुष्टि होला ।
यति बेला अमिरिकन प्रस्ताव MCC मुलुक भर आलोचित छ सरकार यो घटनाले कमजोर बन्ने संकेत छ । तपाईले भने जस्तो MCC कुन आँखा बाट सहि देख्नु भयो यस्मा पनि बहस गरौंला तर तपाईका अभिव्यक्तिले पार्टि धारासहि बन्दैछ आम कार्यकर्ता मुलुक को हितको पक्षमा छौ । त्यसकारण सहि गलत जे होस् MCC तपाईको सरोकारको कुरा हैन जस्ले मुलुक चलाई राखेको छ उस्ले यस्को जिम्मेवारी लिने छ । जसरि नाकाबन्धि खोल्न सरकारमा गएर आलोचित र धारासाहि भयौ । MCC समर्थन ले पार्टि संरचना ध्वस्त हुने छ । यो अमेरिकन प्रस्ताव ले कालान्तरमा मुलुक शंकटमा पर्नेमा दुई मत छैन ।
अन्त्यमा : तपाईंको जुन MCC लागू गरौं भन्ने अभिव्यक्ति आयो तर एनसेल को ६६ अर्ब कर असुलौ र मुलुक को संबृद्दि खोजौ भनेर किन आन्दोलनमा आउनु हुन्न ? 53 अर्ब भिक माग्ने, नेपालि जनताको रगतपशिना परेको कर असुल्न भ्रष्टाचारको बिरोध नगर्ने हामी कति मौलिकतावादी ? कसरी राष्ट्रवादी ? कसरी स्वाभिमानि ? कसरी निस्कलंकित हुन सक्छौ ? अब यदि तपाईं तपाईलै जन्माउनु भएको र हामिलाई सिकाउनु भएको संवर्धनवाद भित्रका राष्ट्रवादि एजेण्डा जिवन्त वनाउन चाहनु हुन्छ भने एउटा बिकल्प छ । त्यो दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हास्तान्तरण गर्ने यो भनेको तपाईले मात्र छाड्नु पर्छ हैन प्रत्यक स्थानिय तहवाट नेतृत्व परिमार्जन गर्दै पार्टि सुद्दिकरण गर्नु आबस्यक छ । तपाईं सिद्दान्त जन्माउने जन्मदाता हुनुन्छ अभिभावको त्याग वाट मात्र सन्तान र ईतिहास मजबुद पार्न सकिन्छ । हैन भने पार्टि त सकिन्छ नै तपाईको समेत ईतिहास कि कालो अक्षरमा लेखिन्छ कि मेटिन्छ यसमा दुईमत छैन । यस पन्नामा यति मात्र अटाउन सकें धेरै कुरा नछुटेका हैनन् । पुन राजनैतिक रंगमन्चमा आउने छु । धन्यवाद ।
( उनी राप्रविस हुँदै राप्रपा गोरखा पार्टी सदस्य/सह-सचिव /सचिव / प्रत्यासि अध्यक्ष / गण्डकी प्रदेश सदस्य हुन )
प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ५, २०७६ 12:14:41 PM |
Prevएमसीसी परियोजना:नेपाललाई गुलाम बनाउने अमेरिकी दाउ !
Nextसलनालमा ‘कर्णाली प्रदेश सम्पर्क मञ्च, दक्षिण कोरिया’को दोस्रो अधिवेशन
सही परिचय दिएछन कमल थापाको । मेरो पनि त्यही बिचार हो । म पनि कुनैदिन कमल थापामा देश को भबिस्य देख्ने मान्छे थिए । आज को मितिमा म कमल थापाको कटु आलोचक बनेको छु । यही फेस बुक बाट कमल थापा लाई सयौ सल्लाह दिए तर उ झ न झ न स्वार्थी देश घाति, सिद्धान्त बिहिन र पद लोलुप हुँदै गयो । आज MCC को बारेमा उस्ले दिएको अभिब्यक्ती ले मलाई सारै दुखी तुल्याएको छ । अब कमल थापाको यो भन्दा तल गिर्ने ठाउ छैन ।